Travel World: May 2012
Myanmar is too HOT
Without doubt, Myanmar is the 'hottest' word in the GMS right now. But new-found fame always comes with challenges. John Watson, CEO of Diethelm Travel Group, discussesacurrent hot-button topic with Raini Hamdi
CEO, Diethelm Travel Group
Tell me about Diethelm's history in Myanmar.
We commenced operations in Myanmar in early 1996. We have offices in Yangon, Mandalay, Bagan and Inle, and employ over 50 multilingual staff.
Is business practically 'booming'?
Yes, it's fair to say that. We are experiencing serious accommodation congestion in Yangon and Mandalay. As these two cities formamajor part of many tour programmes, (the room shortage) limits the ability to confirm full itineraries.
I am concerned that things are moving so fast; there are problems right now and I expect more in the future.
For example, given the high level of demand for Myanmar, from both the corporate and the leisure sectors, we are finding that some hotels are tearing up their contracts and re-negotiating each booking – upwards, of course. Some hotels are takingavery short-term view which will certainly damage Myanmar's reputation asatourist destination.
Our customers, mainly from Europe and America, just cannot understand how hotels can change the rules of the game – we have to spendalot of time explaining to them that certain owners are simply saying 'take it or leave it'.
Supply and demand is now out of kilter and will remain so for at least the high season.
There is little we can do with properties that are determined to maximise profits at this time. We point out to them that the current situation will not last forever and that overseas tour operators will remember when hotel stock increases over the next few years who played fair with them.
The management of the more enlightened hotels understand the point, but some will not listen. This is really sad, because it damages the country's reputation. Perhaps media, such as yours, can help convince properties to honour commitments already made and in place?
Also, we are advising overseas operators to try to fill shoulder and low-season where availability is easier to obtain.
The Myanmar government is actively involved in trying to ensure there isafair distribution of rooms for the various hospitality segments. We see some results in the FIT area, but the group and series business is proving harder.
I would also encourage the Myanmar government to ensure that Foreign Direct Investment hotels and local hotels follow the same rules in ensuring sustainable development of tourism to Myanmar.
Are you absorbing these unforeseen rate increases?
No, we are an agent already working on thin margins and cannot afford to work for nothing. Our costs are increasing rapidly due to fuel increases, general inflation and staff being offered increasingly-generous packages to move to the many new companies outside the travel sector establishing themselves in Myanmar.
How are the overseas operators reacting?
The operators who have supported Myanmar through the 'difficult' years are not reacting well to the current difficulties. They feel they should not be treated unfairly and their loyalty should be rewarded.
I am not sure how the 'new' overseas operators now trying to establishapresence in Myanmar are faring, as we are concentrating on our existing long-standing customers.
One obstacle facing operators is the increasing trend of hotels asking for pre-payment of rooms for high season, which means significant changes to the current arrangement which is basically open credit. In-country tour operators will be hard pressed to fund this investment from free cashflow and will need to make back-to-back arrangements with overseas tour operators who send them business.
All this leads to additional administration and cost burdens.
Myanmar tourism and the trade in general should learn from similar situations we have seen in the region in years gone by. Service providers should takealong-term view and bear in mind that supply and demand will, in the end, even out.
This article was first published in TTG Asia, May 18 issue, on page 10. To read more, please view our digital edition or click here to subscribe.
Re: Hoteliers eye Myanmar's hospitality sector
Hi Herve! Thanks you got the point. 8000 hotel rooms (according to "hotel and tourism ministry") are meant for Yangon only, not the whole country. This news thread is from Channel News Asia and they have made it wrong.
On Fri, Jun 1, 2012 at 11:28 AM, herve Flejo <herve.flejo@gmail.com> wrote:
Hello Nyi Nyi , i can t find reell information about the investment past end new hotels in Myanmar , when you talk about 8000 hotel rooms , i find 655 hotels and around 22120 rooms , is it correct and where we can find the correct information ?
2012/6/1 Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com>
SINGAPORE: Hoteliers are eyeingaslice of Myanmar's hospitality sector.
Myanmar's reforms are coming in thick and fast. This has caught the attention of hospitality players who are zooming in on the fact that the country only has 8,000 hotel rooms, compared to neighbouring Thailand, with more than 230,000 rooms.
Thai-based hotel management company Onyx is one player that's keen to get into Myanmar. Simon Allison, chief development officer and executive vice president, Onyx Hospitality Group, said: "We see enormous potential across the whole country. We'd love to have two or three properties in Yangon at different levels - five, four and three stars. We'd like to be in the key tourist locations - Bagan, Mandalay. I think the only place we wouldn't be too keen on is the capital Naypyidaw because I think there is too much supply."
Myanmar has seen unprecedented political reform since last March, when its first civilian President, ex-military man Thein Sein assumed office. Since then, democracy leader Aung San Suu Kyi has wonaseat in parliament, and as recent as last month, the West European Union and the US suspended economic sanctions on the country.
Thura Soe-Paing, managing director, All Myanmar Investment Partners, said: "Politically we've seen huge changes - we didn't expect this to happen so fast, so soon. On the economics side, because most of the reform in Myanmar has been led by the political reform, the economic laws have slightly lagged behind. So some of the laws such as the new (foreign direct investment) FDI law have been delayed from March and now we expect it in July."
Robert McIntosh, executive director, CBRE Hotels Asia Pacific, said: "Foreign investors will be looking for return on equity certainly in excess of 20 per cent. But there's quiteabit of risk attached to that. And there'll be some projects that'll make quiteabit more, some that make substantially less. But certainly we need to achieve quite high rates of return."
Simon Allison said: "In terms of rule of law, investment and so on, clearly the rules are changing week by week. There's stillalot to do. Until investors really know that they can secureatenor, and - I know the government is saying it won't nationalise anything under the new foreign investment law - but until there'saslightly clearer picture of where the trend is going, and how easy it is to set up foreign business - that'll all be obstacles."
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/DY_mXt4ounIJ.
48 B, Inya Yeik Tha Road, (behind Marina residence)
Mayangone Township, YANGON. MYANMAR.
Tel: (951) 665488, 655642, 720151,
portable urgenceaYangon 09 5017630
Posted by Travel at 10:13 PM0comments
Posted by Travel at 9:58 PM0comments
Re: မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ( ကိုအံ့ဘုန်းမြတ် - ဒီဗီဘီ သတင်းထောက်၏ မေးခွန်း။ ( Question by DVB )
သတင်းစာထဲပါတဲ့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ၂၇ နိုင်ငံကိုခွင့်ပြုလိုက်တာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုမရည်ရွယ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည် tourism ကို impact နည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးလို့ဆိုတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားက ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်လိုသူတွေမြန်မာပြည်လာလေ့လာဖို့လွယ်ကူသွားစေနိုင်တာကိုတော့မြင်ရပါတယ်။ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
On Tuesday, May 29, 2012 4:34:12 PM UTC+6:30, chawchaw mirror wrote:
ဒီကနေ့ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ စီးပွားရေး၊ ပြည်ဝင်နဲ့ ဖြတ်သန်းဆိုက်ရောက်
ဗီဇာ ၂၇ နိုင်ငံကို ခွင့်ပြုလိုက်တာ အပေါ် မြန်မာပြည် Tourism ကို
impact ရှိပါသလား။ အမြင်လေး နည်းနည်း ကွန့်မန့် သတင်းအတွက်
ရချင်လို့ပါခင်ဗျာ။( Question by DVB )
ညဏ်မှီသလောက် သုံးသပ်ရတာTourism ကို impact မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့
အခုပေးမဲ့ visa on arrival က business visa သမားတွေ အတွက်ပါ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကို မလိုအပ်ဘဲ နဲ့ လဲ Visa on arrival ပေးတာကိုလဲ
တံခါး မရှိ။ ဓားမရှိ အစစ် အဆေးအမေး အမြန်းအထွေအထူးမလုပ်ဘဲ။
လုပ်ထုံး လုပ်နည်း မမှန်ကန်ဘဲ လွယ်လွယ် ကူကူ ၀င်ချင် သလို
(အခု့ လောလောဆယ် မှာအချို့လုပ်ငန်းရှင် တရုတ်တွေ။ကိုရီးယားတွေ အများဆုံး
စည်းကမ်းမဲ့ နေတာပါ။ )
Visa on arrival ကို Tourist တွေအတွက်သံရုံးမရှိသေးတဲ့( စပိန် လို)
နိုင်ငံကလွဲရင်ကျန်နိုင်ငံက သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး
လက်ရှိ Tourism မှာ visa on arrival လိုအပ်နေတာကမြန်မာသံရုံးမရှိသေးတဲ့
စပိန် လူမျိုးတွေ အတွက်အဓိကပါ။
သူများနိုင်ငံတွေ သွားရင်လဲ ဗီဇာ ကတော့ တစ်ပတ် သို့ မဟုတ် ၃ ရက်
အနည်းဆုံး စောင့်ရတာ ပါဘဲ။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ တွေ သွားရင်လဲ စောင့်ရတာပါဘဲ။ ၂ ရက်။ ၃ ရက်
Business Visa သမားတွေ၊စီးပွားရေး လာလုပ်မယ် လို့ ဆိုတဲ့ သူတွေက
သူ့တို့က အလွန်ဆုံးနေရင် ၁၀ ရက်ဘဲ။ tourist site
တွေကိုသာရည်ရွယ်ပြီးသွားတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဟိုတယ်။
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းသမားကလွဲရင်ပေါ့။tourist အစစ်က မှ tourist site တွေ
အမြန်ဆုံး ထိရောက်တဲ့ ၀င်ငွေ ပြည်သူတွေ လက်လုပ်လက်စားတွေ
( လမ်းဘေးဈေးသည်၊မြင်းလှည်း ဆိုက်ကားသမား
အစထားလို့ )လူတန်းစားပေါင်းစုံ အတွက် ၀င်ငွေ သက်တောင့်သက်သာရနိုင်မယ်။
Business Visa သမားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများ အခု
မြင်နေရတာက မြန်မာပြည် ရဲ့သံယံဇာတတွေကို ဘာတွေ ဘယ်လို လာနှိုက်ထုတ်ရမလဲဘဲ
စဉ်းစားပြီး အလုပ်လာလုပ် ချင်နေ ကြတာ။
(ဥပမာ။ ။ ကြေးနီစီမံကိန်း။ ရေအားလျှပ်စစ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့။ ရေနံ။
တွင်းထွက်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး။ကျွန်းသစ် နှင့်သစ်တောထွက် အမျိုးမျိုး။ )
စတဲ့ Natural Resource ဘာတွေ ထုတ်လို့ရမလဲဘဲ အသဲအမဲ စိတ်ဝင် စားတာ။
human Resource မြန်မြန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် ပညာရေးကဏ္ဍ ။တွေကို
ကနည်း နေတယ်လို့ မြင်တယ်။
နိုင်ငံခြားသား လူဝင်များရင် တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက် ကောင်းကျိုး၊
အဆိုးနည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ အဖြေရှာရတော့ မှာပါ။ဆယ်စုနှစ်များစွာ
တံခါးပိတ်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်အနေနဲ့ ဒါတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို
လိုပါလိမ့်မယ်။ဆိုးကျိုးတွေကိုတော့ အကျယ် မပြောချင်တဲ့ အတွက်မြန်မာလို
တံခါးပိတ်တိုင်းပြည် တစ်ခုအနေနဲ့ အခုလို လ.ဝ.က ပေါ်လစီ ပြောင်းလဲခြင်းဟာ
Cultural Shock တစ်ခု ဖြစ်လာလောက် အောင်ကို Culture အပေါ်မှာ
သက်ရောက်မှုကြီးမားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားမကြည့်ဘဲ ဒီနှစ်
ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သင်္ကြန် မစခင်က မဏ္ဍပ်တွေ အင်္ဂလိပ်နံမည် မပေးရ။
ဘာမလုပ်ရ။ညာမလုပ်ရ။ ပြီးတော့လဲ ဥပဒေ ဘက်က ဘာမှထိရောက်အောင် အရေးယူတာ
မျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ဥပဒေက on paper မှာ ဘဲဖြစ်နေတယ်။
ဒါတွေကို ကြည့်ပြီးရင် နမူနာ သင်ခန်းစာယူပြီး အစိုးရဘက်ပိုင်းက လုပ်ရမည့်
နည်းဥပဒေ တွေ အများကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အားမနာတမ်း
ပြောရရင် မွဲတေနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလည်း
ပိုမိုကြီးထွားလာဦးမှာပါ။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ကိုမပျက်စီးအောင် ဘယ်လို
အားထုတ်ကြမလဲလို့ အခုကတည်းက သက်ဆိုင်သူတွေ
ဥပမာ။ ။ မရှိဘူးလို့ ငြင်းလို့လုံးဝမရတဲ့ ပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုလည်း
ကျန်းမာရေးဆေးစစ်မှုတွေနဲ့ အတူ၊ တိကျပြတ်သားတဲ့ နည်းဥပဒေ အခိုင်အမာတွေ
၊မတရားနှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုများကင်းစင်စေရေး။စတဲ့စတဲ့ ကိစ္စ တွေကိုလဲ
မျက်စိမှိတ်ပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု culture , CULTURE အော်ပြီး။ CULTURE
ထိခိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြည့်တန်ဆာ နှိမ်နင်းရေးဘဲလုပ်ပြီးမသိဟန်ဆောင်
welcome to Myanmar, please don't be inahurry to catch up / please
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/Q4FnVE318G8J.
Posted by Travel at 9:08 PM0comments
Re: နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲတွေ့
ရှင်တို့ မှားများနေသလားလို့ ကိုဇေဗီးယား နဲ့ ကိုညီညီတို့ရေ
ကြယ်အဆင့်ဟိုတယ်တွေက ရပါတယ် သူတို့က စေတနာနဲ့ ဧည့်သည်တွေကို
Booking လုပ်ရင် Suite , Jr Suite, Presidential Suite ဆိုတဲ့
ကိုယ့်ဧည့်သည်တွေ မတည်းတာတော့ ကိုယ့်ဧည့်သည်အပစ်ပေါ့
၀န်ကြီးဌာနကလဲ ဖြေတော့ ဖြေရှင်းနေကြရှာပါတယ် သူတို့လဲ နိုင်ဂံခြားက
ဧည့်သည်တွေတွေ့ရ နိုင်ဂံခြားသွားရနဲ့ ယားလို့တောင်မကုတ်အားကြဘူးလေ
နောက်တခုကလဲ Travel & Tour Company ကြီးတွေက Block Booking
တွေလုပ်ထားလို့ပါတဲ့ သူတို့တွေကို Deposit တွေ ဒီလကစပြီး
မကြာမီ လာမည် မျှော်...........................
On 6/1/12, Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com> wrote:
> Thanks for your input here. We apparently see "ignorance." Somebody might
> have known this but sneezed. That's why I posted how ignorant the Director
> expressed his voice over number of hotel rooms in Yangon. On the flip
> side, let's face the truth that hoteliers are business men and they do have
> their own right to "do business" what they think they are confident or it
> is profitable (whether it is ethical or not is another story). This might
> have answered your question no. (a) & (b). About your (c) and (d) is much
> wider in range to discuss about. It is first to talk about how (whether or
> not) to "legalize" first about "prostitution." There arealot of "yes and
> no" situation answering your questions. And some cases, it's not all about
> "prostitution," it's about social trend which require "hotel rooms" for
> sexual pleasure. We can't stop them. But *tradition* holds that they must
> not be disclose in public. Nor is it discussable. To help tourism, we can
> only categorize it making it clear that those are not meant for "cultural
> tourism" and so on and so forth. Apparently, in your extract, some comments
> are totally unreliable for tourists but locals. Their comments such as
> "Clean" "very good" what does it mean? So be it, Xavier. We gotta find
> "alternatives" let the players think "out of box."
> On Thursday, May 31, 2012 8:49:17 PM UTC+6:30, Ko Nyi Nyi wrote:
>> Dear friends ,
>> Here is an article from Eleven Media Group
>> နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊
>> ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲတွေ့ PDF Print
>> Wednesday, 30 May 2012 10:24
>> AddThis Social Bookmark Button
>> မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု
>> များပြားလာသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲမှု၊
>> ဟိုတယ်အခန်းငှားရမ်းခ နှုန်းထားများ မြှင့်တင်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာ၍
>> အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
>> ဟိုတယ်အခန်းခ နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲမြင့်တက်မှုကြောင့် Pack age Tour
>> စီစဉ်သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင်
>> အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
>> လုပ်ကိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများကို မေလအတွင်းက ပြု လုပ်ခဲ့သည်။
>> ''ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးမခြားနား ဖြစ်နေပါသေးတယ်''ဟု
>> မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
>> ဟိုတယ်အခန်းခ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အဓိက
>> ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့သည် ခရီးသွားအများစု စတင်ရောက်ရှိ
>> နေထိုင်ရာဖြစ်ခြင်း၊ နေပြည်တော်သို့ လာရောက်သော နိုင်ငံတကာ
>> ခရီးသွားများကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ဆင့် ခရီး
>> ဆက်လေ့ရှိကြခြင်းတို့ကြောင့် ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲမှုများ
>> အခြားဒေသများထက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
>> ''အခန်းခဈေးနှုန်းမြင့်တက်တဲ့ ပြဿနာက၊ ပြဿနာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒီကိစ္စက
>> အဓိကက အခန်းမလောက်လို့ ဖြစ်လာတာပဲ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ကမ္ဘာလုံးက
>> စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ အလည်အပတ် ခရီးသွားတွေ အများကြီး ရောက်လာသလို
>> စီးပွားရေး ခရီး သွားတွေလည်း အများကြီးပဲ လာချင်နေကြတယ်။ နေ့ချင်းညချင်း
>> နှစ်ဆတက်လာတယ်။ ဟိုတယ်တွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ခရီးသွား တည်းခိုမယ့်
>> အဆင့်မီဟိုတယ်ဆိုတာကလည်း နည်းတော့ ရှိတဲ့နေရာ ပြုံတိုးကြတဲ့အခါ
>> ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပါ။ booking တော့ ယူပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရှိတာက ၁၀၀၊
>> လာချင်တာက ၄၀၀ ဆိုရင်တော့ မယူနိုင်ဘူးပေါ့''ဟု ရန်ကုန်မြို့၌ နိုင်ငံခြား
>> ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှ
>> တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
>> စီစဉ်သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်
>> အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
>> လုပ်ကိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများကို မေလအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
>> မြန်မာနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးအရ လာရောက်သော ခရီးသွားများ၊ အလည်အပတ်
>> လာရောက်သော ခရီးသွားများ စသည့် ခရီးသွား အမျိုးအစားနှစ်ခုသည် ဆတူနီးပါး
>> တိုးတက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
>> လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဟိုတယ်အခန်းခ နှုန်းထားများမှာ နိုင်ငံခြား
>> ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဟိုတယ်အချို့တွင် အမေရိကန်
>> ဒေါ်လာ ၂၅၀ မှ ၃၀၀ အကြား၊ အချို့တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်
>> ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
>> ''တချို့ခရီးစဉ်တွေက cancel ဖြစ်လာပြီ။ စပိန်ခရီးသွားတွေဆို cancel
>> ဖြစ်တာရှိတယ်။ အရင်အလုပ် ၁၀ ခုလောက်ရမှာ တစ်ခုပဲရတော့ မယ့်
>> အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆို ဧည့်သည်ကို ရန်ကုန်မှာ မထားဘဲ မန္တလေး၊
>> ပုဂံကို တိုက်ရိုက် ခေါ်သွားရမယ့်အခြေအနေမှာ ရောက် လာပါတယ်။ တကယ်တော့
>> ရေရှည်ကို မကြည့်ဘူးပေါ့။ ခရီးတစ်ခုက cancel ဖြစ်ရင် အကျိုးသက်ရောက်မှုက
>> နယ်အထိ ရောက်မှာပါ။ ပြည်တွင်းဟိုတယ်တွေထက် နိုင်ငံခြား
>> ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဖွင့်တဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ကြုံရတယ်။
>> တချို့ဟိုတယ်ကြီးမှာ ကျတော့ စာချုပ်ကို လေးစားတယ်။ ဈေးမပြောင်းဘူး''ဟု
>> မြန်မာနိုင်ငံခရီး သွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာ ၀န်ရှိသူက ပြောပြသည်။
>> လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု တိုးတက်မှုရှိထားသော
>> အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အာရုံစိုက်မှု၊ သတိပြုမှုကိုလည်း ရရှိနေကာ
>> လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှုများ လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း
>> ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းမှုများ ရှိနေသည်။ ခရီးစဉ်စရိတ်မြင့်
>> တက်လာခြင်းသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်လာသော
>> အချိန်တွင် နှောင့်နှေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ် လာနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
>> ''မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိမှာ ခရီးစဉ်စရိတ်တွေ ဈေးမြင့်လာတော့ သတိထားပြီး
>> ရောင်းလာရတဲ့ အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်''ဟု Myanmar Polestar ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ
>> မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးကျော်မင်းထင်က ပြောကြားသည်။
>> မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ
>> ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ အချက်အလက်များအရ ဟိုတယ်၊
>> မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းပေါင်း ၇၃၁ ခုရှိပြီး အခန်းအရေအတွက် ၂၅၀၀၂ ခန်း
>> ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း ၄၀၀၀ ၀န်းကျင်သည်
>> နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
>> +1 #5 aungzayya308 2012-05-31 19:45
>> ဟိုတယ်ခန်းမလောက်လို့ဆို ပြိခုချိန်များ home stay တွေခွင့်ပြုကြည့်ပါလား
>> မင်းတို့ ဟိုတယ်တွေ ဟိုဟာခန်းလုပ်မှလူရတော့မယ်
>> +1 #4 USaytanar 2012-05-31 11:03
>> Is U Tint San working for ACE or "hotel and tourism"?
>> If he is working for hotel and tourism, he should come up with many
>> solutions. Right now, there is nothing.
>> +18 #3 aung ning 2012-05-30 16:45
>> သူဌေးဖြစ်နောက်ကျလို့ အချိန်မှီလိုက်နိုင်အောင်တိုးတောင်းတာနေမှာပါ။
>> +45 #2 khinmgu 2012-05-30 14:14
>> Quoting Alexander:
>> ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ကားတွေ၊ ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ဖုန်းတွေ အပြင်၊
>> ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဦးမယ်နော်။ :D
>> ......... ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
>> +83 #1 Alexander 2012-05-30 11:10
>> Refresh comments list
Posted by Travel at 8:01 PM0comments
Thanks for your input here. We apparently see "ignorance." Somebody might have known this but sneezed. That's why I posted how ignorant the Director General is:- expressed his voice over number of hotel rooms in Yangon. On the flip side, let's face the truth that hoteliers are business men and they do have their own right to "do business" what they think they are confident or it is profitable (whether it is ethical or not is another story). This might have answered your question no. (a) & (b). About your (c) and (d) is much wider in range to discuss about. It is first to talk about how (whether or not) to "legalize" first about "prostitution." There arealot of "yes and no" situation answering your questions. And some cases, it's not all about "prostitution," it's about social trend which require "hotel rooms" for sexual pleasure. We can't stop them. But tradition holds that they must not be disclose in public. Nor is it discussable. To help tourism, we can only categorize it making it clear that those are not meant for "cultural tourism" and so on and so forth. Apparently, in your extract, some comments are totally unreliable for tourists but locals. Their comments such as "Clean" "very good" what does it mean? So be it, Xavier. We gotta find "alternatives" let the players think "out of box."
On Thursday, May 31, 2012 8:49:17 PM UTC+6:30, Ko Nyi Nyi wrote:
Here is an article from Eleven Media Group
နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊
ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲတွေ့ PDF Print
မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု
များပြားလာသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲမှု၊
ဟိုတယ်အခန်းငှားရမ်းခ နှုန်းထားများ မြှင့်တင်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာ၍
အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟိုတယ်အခန်းခ နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲမြင့်တက်မှုကြောင့် Pack age Tour
စီစဉ်သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင်
အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများကို မေလအတွင်းက ပြု လုပ်ခဲ့သည်။
''ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးမခြားနား ဖြစ်နေပါသေးတယ်''ဟု
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
ဟိုတယ်အခန်းခ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အဓိက
ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့သည် ခရီးသွားအများစု စတင်ရောက်ရှိ
နေထိုင်ရာဖြစ်ခြင်း၊ နေပြည်တော်သို့ လာရောက်သော နိုင်ငံတကာ
ခရီးသွားများကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ဆင့် ခရီး
ဆက်လေ့ရှိကြခြင်းတို့ကြောင့် ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲမှုများ
အခြားဒေသများထက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
''အခန်းခဈေးနှုန်းမြင့်တက်တဲ့ ပြဿနာက၊ ပြဿနာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒီကိစ္စက
အဓိကက အခန်းမလောက်လို့ ဖြစ်လာတာပဲ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ကမ္ဘာလုံးက
စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ အလည်အပတ် ခရီးသွားတွေ အများကြီး ရောက်လာသလို
စီးပွားရေး ခရီး သွားတွေလည်း အများကြီးပဲ လာချင်နေကြတယ်။ နေ့ချင်းညချင်း
နှစ်ဆတက်လာတယ်။ ဟိုတယ်တွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ခရီးသွား တည်းခိုမယ့်
အဆင့်မီဟိုတယ်ဆိုတာကလည်း နည်းတော့ ရှိတဲ့နေရာ ပြုံတိုးကြတဲ့အခါ
ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပါ။ booking တော့ ယူပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရှိတာက ၁၀၀၊
လာချင်တာက ၄၀၀ ဆိုရင်တော့ မယူနိုင်ဘူးပေါ့''ဟု ရန်ကုန်မြို့၌ နိုင်ငံခြား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှ
စီစဉ်သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများကို မေလအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးအရ လာရောက်သော ခရီးသွားများ၊ အလည်အပတ်
လာရောက်သော ခရီးသွားများ စသည့် ခရီးသွား အမျိုးအစားနှစ်ခုသည် ဆတူနီးပါး
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဟိုတယ်အခန်းခ နှုန်းထားများမှာ နိုင်ငံခြား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဟိုတယ်အချို့တွင် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ၂၅၀ မှ ၃၀၀ အကြား၊ အချို့တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်
''တချို့ခရီးစဉ်တွေက cancel ဖြစ်လာပြီ။ စပိန်ခရီးသွားတွေဆို cancel
ဖြစ်တာရှိတယ်။ အရင်အလုပ် ၁၀ ခုလောက်ရမှာ တစ်ခုပဲရတော့ မယ့်
အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆို ဧည့်သည်ကို ရန်ကုန်မှာ မထားဘဲ မန္တလေး၊
ပုဂံကို တိုက်ရိုက် ခေါ်သွားရမယ့်အခြေအနေမှာ ရောက် လာပါတယ်။ တကယ်တော့
ရေရှည်ကို မကြည့်ဘူးပေါ့။ ခရီးတစ်ခုက cancel ဖြစ်ရင် အကျိုးသက်ရောက်မှုက
နယ်အထိ ရောက်မှာပါ။ ပြည်တွင်းဟိုတယ်တွေထက် နိုင်ငံခြား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဖွင့်တဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ကြုံရတယ်။
တချို့ဟိုတယ်ကြီးမှာ ကျတော့ စာချုပ်ကို လေးစားတယ်။ ဈေးမပြောင်းဘူး''ဟု
မြန်မာနိုင်ငံခရီး သွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာ ၀န်ရှိသူက ပြောပြသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု တိုးတက်မှုရှိထားသော
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အာရုံစိုက်မှု၊ သတိပြုမှုကိုလည်း ရရှိနေကာ
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှုများ လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းမှုများ ရှိနေသည်။ ခရီးစဉ်စရိတ်မြင့်
တက်လာခြင်းသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်လာသော
အချိန်တွင် နှောင့်နှေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ် လာနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိမှာ ခရီးစဉ်စရိတ်တွေ ဈေးမြင့်လာတော့ သတိထားပြီး
ရောင်းလာရတဲ့ အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်''ဟု Myanmar Polestar ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးကျော်မင်းထင်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ အချက်အလက်များအရ ဟိုတယ်၊
မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းပေါင်း ၇၃၁ ခုရှိပြီး အခန်းအရေအတွက် ၂၅၀၀၂ ခန်း
ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း ၄၀၀၀ ၀န်းကျင်သည်
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
+1 #5 aungzayya308 2012-05-31 19:45
ဟိုတယ်ခန်းမလောက်လို့ဆို ပြိခုချိန်များ home stay တွေခွင့်ပြုကြည့်ပါလား
မင်းတို့ ဟိုတယ်တွေ ဟိုဟာခန်းလုပ်မှလူရတော့မယ်
+1 #4 USaytanar 2012-05-31 11:03
Is U Tint San working for ACE or "hotel and tourism"?
If he is working for hotel and tourism, he should come up with many
solutions. Right now, there is nothing.
+18 #3 aung ning 2012-05-30 16:45
+45 #2 khinmgu 2012-05-30 14:14
ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ကားတွေ၊ ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ဖုန်းတွေ အပြင်၊
ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဦးမယ်နော်။ :D
......... ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
+83 #1 Alexander 2012-05-30 11:10
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/TGb1oo5TjcsJ.
Posted by Travel at 7:36 PM0comments
Re: Need infos Mrauk Oo ( or ) Excursion to Mrauk Oo
Attn: Thida Win: Pls refer this topic to ၈ ဇွန်လ (သောကြာနေ့ ) နံနက် (၁၀)နာရီ မြောက်ဦးခရီးစဉ် information sharing by ဦးရွှေမြအောင် နှင့် ဦးထွန်းမြတ် . Hope this helps. Cheers, Frankie
On Thu, May 24, 2012 at 3:00 PM, thida win <thidawin2009@gmail.com> wrote:
Dear Ma Chaw,
Thanks you so. I'll contact Ko Myo Min Thant.
On 5/23/12, chawchaw mirror <chawchawmirror@gmail.com> wrote:
> Dear Thida Win
> ဦးမျိုးမင်းသန့် ( ဂျာမန်ဘာသာဧည့်လမ်းညွှန် )
> ၀၉ ၅၁၀ ၁၉၆၅ သည် မြောက်ဦး မြို့ တွင် တစ်လ တိတိ
> ၎င်း ဧည့်သည် ဂျာမန်လူမျိုး များ နှင့် on tour သွားဘူးပါသည်။
> ၎င်း ထံ တွင် မြောက်ဦး အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရှိနိုင်ပါသည်။
> ထို့ပြင် ဧရာဝတီ တိုင်း။ ပင်လယ်ဘက် သို့ ငါးဖမ်းထွက်ခြင်းကို
> ပြင်သစ်ဘာသာ(TV-5 ) မှ အဖွဲ့သားများနှင့် တီဗီ ဇတ်လမ်း
> On May 23, 1:54 pm, thida win <thidawin2...@gmail.com> wrote:
>> Dear Ko Than Tun Oo and Ko Nyi ( Frankie ),
>> Could you kindly give me some Information about the Mrauk Oo
>> or Could you make Excursion to Mrauk Oo after Mandalay trip?
>> Ko Nyi! could you arrange the Talk Show about the Mrauk Oo at
>> the MGTA Office? or some Discussion about Mrauk Oo. I would like to
>> make the observation about it and also would like to make excursion
>> also. If some Guides who have not been yet to Mrauk U. Would like to
>> go together to Mrauk U :))))
>> Thida Win
>> G- 4412
Posted by Travel at 7:06 PM0comments
Hoteliers eye Myanmar's hospitality sector
Posted by Travel at 6:54 PM0comments
Urgent requirement with direct client for Jr. Project Manager in Minneapolis, MN
We have an urgent requirement of Jr. Project Manager. Kindly find the job description as mentioned below and let me know your interest with your updated resume ASAP.
Position Role/Title: Jr. Project Manager
Position ID: 13522
· Responsible for delivery of infrastructure, managing timeline, deliverables, budget, and risk / issues.
· Ensure Technical Architecture standards are followed working with Tech Arch.
· Ensure project goals and timelines are communicated to all appropriate team members.
· Manage workplans onaweekly basis.
· Ensure key dependencies across teams are understood by project team members.
· Ensure the project follows the defined methodology.
· Manage infrastructure RFCs following the standard RFC process
· Producingaweekly status report
· 1-2years' experience in Project Management - Infrastructure projects experience;
· ADM Methodology experience
Infrastructure background: system administrator, network, database administration
Posted by Travel at 4:42 PM0comments
Concerning to discussed topic, please see below extract in Myanmar
(a) What do you think of these accommodations for tourism industry?
(b) What do you think that Ministry of Tourism considers on them?
(c) What do you think of social & cultural impact from hotel operation
of such kind?
(d) What do you think of action(s) to enable to prevent the market
share of such hotels?
Honestly speaking, this extract is copied fromaBurmese bog. There is
no garantee from this contributor for accuracy of fact.
………………………………. စမ်းချောင်းမှာဆို ရှမ်းလမ်းမှာ Academy ဆိုတဲ့
ဟိုတယ်တစ်ခုရှိပါတယ်။အခန်းခက ညလုံးပေါက်ဆိုရင် 15000 ပါ။ session
နဲ့ယူရင်တော့ 10000 လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ အခန်းတွေက ကျယ်လည်းကျယ်
သန့်လည်းသန့်ပါတယ်။ ရှမ်းလမ်း အလယ်နားမှာပါ။
အာရှတော်ဝင်နဲ့မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ရှိတဲ့ လမ်းကြားလေးထဲမှာပါ။ နောက်
windsor လမ်းမှာ ရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေလည်း ကောင်းပါတယ်။ Hotel Windsor က
တစ်ညကို25000 ပါ။ Hotel Shin Saw Pu က 18000 ပါ။ အဲဒီ ဘေးမှာပဲ Hotel
Green ဆိုတာရှိပါတယ်။ ခြံထဲမှာ ဖွင့်ထားတာပါ။ အခန်းခ ကတော့ 18000 ကနေ
25000 အထိ ရှိပါတယ်။ တာမွေဘက်မှာဆိုရင် Hotel Pho Sein က
တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အခန်းခကတော့ 30000-35000ကြားရှိပါတယ်။ အဲ
ဒိုင်လျှိုလေးသွားချင်သူတွေ အတွက်တော့ အင်းယားလမ်း
အလယ်နားကရွှေလီလမ်းထဲမှာရှိတဲ့ Comfort Inn ကမဆိုးပါဘူး။ အခန်းခက 10000
ပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတာက သူက
လမ်းကြားထဲမှာရှိတယ်။ပြီးတော့အဲဒီလမ်းက ခြံတွေများတော့ နည်းနည်းလည်း
ရှင်းပါတယ်။။ နောက် အထက (၂) ကမာရွတ် နားက Yoma2လည်း လူရှင်းပါတယ်။
လေဆိပ်နားမှာ Airport Inn ဆိုတာလည်း တော်တော်လူရှင်းပါတယ်။
အခန်းခကတော့15000. ရှစ်မိုင်ဘက်ကတော့ မြို့ထဲဘက်ကနေ သွားရင် မီးပွိုင့်
အကျော်နားမှာပြည်လမ်းပေါ်ကနေ ဘယ်ဘက်ချိုးလိုက်တဲ့ လမ်းကြားလေးထဲမှာ Yangon
Yoma ဆိုတဲ့ ဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟိုတယ်လေးလည်း မဆိုးပါဘူးခင်ဗျာ။
လမ်းမတော် ဘက်မှတော့ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံရှေ့က လမ်းထဲမှာ Vacation Garden
ဆိုတာရှိပါတယ်။ အခန်းခကတော့ 13000 ပါ။ Session နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ 10000
။ စမ်းချောင်းကရှမ်းလမ်းနဲ့ မင်းလမ်းထောင့်မှာ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ဆိုတဲ့
တည်းခိုခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အခန်းခက 8000 ပါခင်ဗျာ။ အဲ Mahabandoola တံတား
အဆင်းနားမှာတော့စိန်တံခွန်ဆိုတဲ့ဟိုတယ် တစ်ခုရှိပါတယ်။ အခန်းခက 8500 နဲ့
11500 ပါ။ 8500ကရေချိုးခန်း တံခါးမပါဘူး၊လိုက်ကာပဲပါတယ်။ 11500 ကတော့
ရေချိုးခန်းတံခါးပါတယ်။ဒါပဲကွာတာပါ။ summit parkview ဘေးးက yangon
international hotel ကောင်းပါတယ် အခန်းကျယ်ပြီး ၂ ယောက်အိပ်ခုတင်
တစ်လုံးနဲ့တစ်ယောက်အိပ်ခုတင် တစ်လုံး ပါတဲ့အခန်းကိုတနေ့ ကို ၃ သောင်းဘာ
မှတ်ပုံတင်မှ ပေးစရာ မလိုပါဘူးနာမည် တောင် ပြောစရာမလိုပါဘူး Summer
Palace ဆိုတာ ပြည်လမ်းပေါ်မှာပါ။ လှည်းတန်းဘက်ကနေ သွားရင် အသံလွှင့်ရုံ
မရောက်ခင်လေးတင်ပါပဲ။ အဲ ဆေးကျောင်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာပါ။
လမ်းကြားထဲကိုဝင်သွားရပါတယ်။ အခန်းတွေကတော့ သန့်ပါတယ်။ အခန်းခက 25000 ကနေ
35000 လောက်ရှိပါတယ်။ ဝါးတမ်းလမ်း လမ်းမတော်မြီု့နယ် မှာရှိတဲ့ MGM
ဟိုတယ်လေးလဲကောင်းပါတယ်။ အခန်း ၃ မျိုးရှိတယ်။ တယောက်ခန်းက ၉၀၀၀ ပါ၊
နှစ်ယောက်ခန်း ကုတင် ၂ လုံးနဲ့က ၁၂၀၀၀ ၊ နှစ်ယောက်ခန်း
နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် ၁ လုံးနဲ့ တယောက်အိပ်ကုတင် ၁ လုံးပါတာက ၁၄၀၀၀ ပါ။
အခန်းတိုင်းမှာ Tv ၊ Aircond ပါပြီးသားပါ။ ဖုန်းအသုံးပြုချင်ရင်တော့ စပေါ်
၅၀၀၀ ထပ်ပေးရပါတယ်။ အခန်းတွေထဲမှာ ၉ လွှာကအခန်းတွေကအကောင်းဆုံးပါ။
အခန်းဌားသူက အခန်းကိုလုံးဝပိုင်သလို အခွင့်ရေးရှိပါတယ်။ အခန်းဌားသူက
သူ့အခန်းထဲကို နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်ခေါ်ခေါ် လူပိုဝင်တဲ့အတွက် အပိုကြေး
ဈေးလည်းသင့်တယ်...။ -ဆရာစံလမ်းက စိန်မိုတယ်...အခန်းခ-၆၀၀၀ိ/..ပါ
Ph-548960 -မြေနီကုန်း M3 နားက သမ္မတဟိုတယ် အခန်းခ-၈၀၀၀ိ/..ပါ -
ရွှေဂုံတိုင် ၅ထပ်ကြီးမှတ်တိုင်ရှေ့က Belmy Hotel .... အခန်းခ-၇၀၀၀ိ/..ပါ -
ရွှေဂုံတိုင် ၅ထပ်ကြီးမှတ်တိုင်မျက်စောင်းထိုးက Shwegondaing Hotel ....
(မြေအောက်ခန်း-Luv Channel ) - အခန်းခ-၂၀၀၀၀ိ/..ပါ -ကန်တော်ကြီး-
ကန်ပတ်လမ်းနဲ့ဦးထွန်းမြတ်လမ်းထောင့်က ကန်တော်ရိပ်ဟိုတယ် ....
အခန်းခ-၁၀၀၀၀ိ/..ပါ -ရွှေဘုံသာလမ်းအပေါ်ဘလောက်ကေ၇ွှဘုံသာ-Guest
House ......... အခန်းခ-၃၀၀၀ိ/..ပါ -ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနဲ့
အနော်ရထာလမ်းထောင့်နားက နေ၀န်းနီနီ-Guest House ..... အခန်းခ-၂၀၀၀ိ/..ပါ -
တာမွေပလာဇာနားက ရွှေဗဟို-ဟိုတယ် .... အခန်းခ-၁၀၀၀၀ိ/..ပါ
ဘုရင့်နောင်မှာတော့ စပယ် တည်းခိုခန်းက အကောင်းဆုံးနော်။ မိုတယ်
အဆင့်လောက်တော့မှီပါတယ်။ တစ်ည ၆၀၀၀ ကျပ်ပါဘဲ။ မင်္ဂလာဈေးမရောက်ခင်
မဆလာစက်မှတ်တိုင်နားက သီရိမင်္ဂလာတည်းခိုခန်း-အခန်းခ-၄၀၀၀ိ/..ပါ မင်္ဂလာဈေး-
ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းနဲ့အနော်ရထာလမ်းထောင့်က စိမ်းလဲ့ကန်သာ တည်းခိုခန်း-
အခန်းခ-၄၀၀၀ိ/..ပါ Traders ဘေးက Central Hotel - အခန်းခ-၁၈၀၀၀ိ/..ပါ
(၂ယောက်စလုံး မှတ်ပုံတင်လိုပါတယ်...။) သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံဘေးက သမ္မတဟိုတယ်-
အခန်းခ-၂၀၀၀၀ိ/..ပါ (၂ယောက်စလုံး မှတ်ပုံတင်လိုပါတယ်...။)
မြောက်ဥက္ကလာမှာဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတာတွေရှိပါတယ် အ၀ိုင်းနားမှာပါ Motel
Venus4နာရီ section 7000 ks, 24 hours 12000 ks, night 9000 Ph
Chan myae Guest house4နာရီ section 7000 ks, 24 hours 12000 ks,
night 9000 Ph ကြိုဆက်မှရပါတယ်။ Bliss ပါ ဟိုတယ် ဘုန်းကြီးလမ်း အောက်ဘတ်
မှာပါ ကမ်းနားနဲနီးပါတယ်ဗျာ။ ၃နာရီမှ ရှစ်ထောင် ၁နာရီ ထက်ယူရင်တော့
နှစ်ထောင် ၁ နေလုံးဆိုရင် ၁၈၀၀၀. နောက်သူကိုနဲနဲကျော်လာရင်တော့
မော်တင်ကားမှတ်တိုင်နာမှာ နဂါးနီ ဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ ဒီဟိုတယ်လဲသန့်ပဗျာ။
သံလျှင်တံတား(သံလျှင်ဘက်ခြမ်း) အနီးက မြမြင့်မို မိုတယ်လေးကတော့
လန်းတယ်... သူကဥယျာဉ်လေးလိုပဲ..ကျယ်တယ်။ ဘန်ဂလိုလေးတွေရော၊
တိုက်ခန်းလိုအခန်းရော နှစ်မျိုးရှိတယ်... ဘန်ဂလိုအခန်းခ ကတော့ 10000 ပါ။
ရှယ်ဘန်ဂလိုဆိုရင် 15000 ပါ။ ရှယ်သန့် တယ်... ရိုးရိုးအခန်းဆိုရင် 5000/
.. Summer Palace ဆိုတာ ပြည်လမ်းပေါ်မှာပါ။ လှည်းတန်းဘက်ကနေ သွားရင်
အသံလွှင့်ရုံ မရောက်ခင်လေးတင်ပါပဲ။ အဲ ဆေးကျောင်းနဲ့
မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာပါ။ လမ်းကြားထဲကိုဝင်သွားရပါတယ်။ အခန်းတွေကတော့
သန့်ပါတယ်။ အခန်းခက 25000 ကနေ 35000 လောက်ရှိပါတယ်။…………………………..
On May 31, 8:19 pm, Ko Nyi Nyi <nyi...@gmail.com> wrote:
> Here is an article from Eleven Media Group
> နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း၊
> ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲတွေ့ PDF Print
> Wednesday, 30 May 2012 10:24
> AddThis Social Bookmark Button
> မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ၀င်ရောက်မှု
> များပြားလာသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲမှု၊
> ဟိုတယ်အခန်းငှားရမ်းခ နှုန်းထားများ မြှင့်တင်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာ၍
> အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
> ဟိုတယ်အခန်းခ နှုန်းထားများ ပြောင်းလဲမြင့်တက်မှုကြောင့် Pack age Tour
> စီစဉ်သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင်
> အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
> လုပ်ကိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများကို မေလအတွင်းက ပြု လုပ်ခဲ့သည်။
> ''ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးမခြားနား ဖြစ်နေပါသေးတယ်''ဟု
> မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
> ဟိုတယ်အခန်းခ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အဓိက
> ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့သည် ခရီးသွားအများစု စတင်ရောက်ရှိ
> နေထိုင်ရာဖြစ်ခြင်း၊ နေပြည်တော်သို့ လာရောက်သော နိုင်ငံတကာ
> ခရီးသွားများကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ဆင့် ခရီး
> ဆက်လေ့ရှိကြခြင်းတို့ကြောင့် ဟိုတယ်အခန်းရရှိရန် ခက်ခဲမှုများ
> အခြားဒေသများထက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
> ''အခန်းခဈေးနှုန်းမြင့်တက်တဲ့ ပြဿနာက၊ ပြဿနာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒီကိစ္စက
> အဓိကက အခန်းမလောက်လို့ ဖြစ်လာတာပဲ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ကမ္ဘာလုံးက
> စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ အလည်အပတ် ခရီးသွားတွေ အများကြီး ရောက်လာသလို
> စီးပွားရေး ခရီး သွားတွေလည်း အများကြီးပဲ လာချင်နေကြတယ်။ နေ့ချင်းညချင်း
> နှစ်ဆတက်လာတယ်။ ဟိုတယ်တွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ခရီးသွား တည်းခိုမယ့်
> အဆင့်မီဟိုတယ်ဆိုတာကလည်း နည်းတော့ ရှိတဲ့နေရာ ပြုံတိုးကြတဲ့အခါ
> ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပါ။ booking တော့ ယူပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရှိတာက ၁၀၀၊
> လာချင်တာက ၄၀၀ ဆိုရင်တော့ မယူနိုင်ဘူးပေါ့''ဟု ရန်ကုန်မြို့၌ နိုင်ငံခြား
> ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှ
> တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
> စီစဉ်သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်
> အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
> လုပ်ကိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများကို မေလအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
> မြန်မာနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးအရ လာရောက်သော ခရီးသွားများ၊ အလည်အပတ်
> လာရောက်သော ခရီးသွားများ စသည့် ခရီးသွား အမျိုးအစားနှစ်ခုသည် ဆတူနီးပါး
> တိုးတက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
> လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဟိုတယ်အခန်းခ နှုန်းထားများမှာ နိုင်ငံခြား
> ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဟိုတယ်အချို့တွင် အမေရိကန်
> ဒေါ်လာ ၂၅၀ မှ ၃၀၀ အကြား၊ အချို့တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်
> ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
> ''တချို့ခရီးစဉ်တွေက cancel ဖြစ်လာပြီ။ စပိန်ခရီးသွားတွေဆို cancel
> ဖြစ်တာရှိတယ်။ အရင်အလုပ် ၁၀ ခုလောက်ရမှာ တစ်ခုပဲရတော့ မယ့်
> အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆို ဧည့်သည်ကို ရန်ကုန်မှာ မထားဘဲ မန္တလေး၊
> ပုဂံကို တိုက်ရိုက် ခေါ်သွားရမယ့်အခြေအနေမှာ ရောက် လာပါတယ်။ တကယ်တော့
> ရေရှည်ကို မကြည့်ဘူးပေါ့။ ခရီးတစ်ခုက cancel ဖြစ်ရင် အကျိုးသက်ရောက်မှုက
> နယ်အထိ ရောက်မှာပါ။ ပြည်တွင်းဟိုတယ်တွေထက် နိုင်ငံခြား
> ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဖွင့်တဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ကြုံရတယ်။
> တချို့ဟိုတယ်ကြီးမှာ ကျတော့ စာချုပ်ကို လေးစားတယ်။ ဈေးမပြောင်းဘူး''ဟု
> မြန်မာနိုင်ငံခရီး သွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာ ၀န်ရှိသူက ပြောပြသည်။
> လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု တိုးတက်မှုရှိထားသော
> အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အာရုံစိုက်မှု၊ သတိပြုမှုကိုလည်း ရရှိနေကာ
> လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှုများ လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း
> ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းမှုများ ရှိနေသည်။ ခရီးစဉ်စရိတ်မြင့်
> တက်လာခြင်းသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်လာသော
> အချိန်တွင် နှောင့်နှေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ် လာနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
> ''မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိမှာ ခရီးစဉ်စရိတ်တွေ ဈေးမြင့်လာတော့ သတိထားပြီး
> ရောင်းလာရတဲ့ အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်''ဟု Myanmar Polestar ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ
> မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးကျော်မင်းထင်က ပြောကြားသည်။
> မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ
> ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ အချက်အလက်များအရ ဟိုတယ်၊
> မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းပေါင်း ၇၃၁ ခုရှိပြီး အခန်းအရေအတွက် ၂၅၀၀၂ ခန်း
> ရှိနေသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း ၄၀၀၀ ၀န်းကျင်သည်
> နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
> +1 #5 aungzayya308 2012-05-31 19:45
> ဟိုတယ်ခန်းမလောက်လို့ဆို ပြိခုချိန်များ home stay တွေခွင့်ပြုကြည့်ပါလား
> မင်းတို့ ဟိုတယ်တွေ ဟိုဟာခန်းလုပ်မှလူရတော့မယ်
> +1 #4 USaytanar 2012-05-31 11:03
> Is U Tint San working for ACE or "hotel and tourism"?
> If he is working for hotel and tourism, he should come up with many
> solutions. Right now, there is nothing.
> +18 #3 aung ning 2012-05-30 16:45
> သူဌေးဖြစ်နောက်ကျလို့ အချိန်မှီလိုက်နိုင်အောင်တိုးတောင်းတာနေမှာပါ။
> +45 #2 khinmgu 2012-05-30 14:14
> Quoting Alexander:
> ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ကားတွေ၊ ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ဖုန်းတွေ အပြင်၊
> ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံး ဟိုတယ်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဦးမယ်နော်။ :D
> ......... ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
> +83 #1 Alexander 2012-05-30 11:10
> Refresh comments list
Posted by Travel at 4:34 PM0comments
MS SQL Server DBA in NYC, NY (Gc/Citizen only)
This isaMS SQL Server DBA role largely responsible for providing operational database services to the organization. We are looking to fillaneed to haveahighly competent and highly motivated individual in this role. This isaproduction DBA role; as such it may require off hour production support activities. Some of the primary responsibilities of this role would include owning, tracking and resolving database related incidents and requests, fulfilling requests and resolving incidents within SLAs, reviewing service related reports (e.g: database backups, maintenance, monitoring) onadaily basis to ensure service related issues are identified and resolved within established SLAs, responding to database related alerts and escalations and working with database engineering to come up with strategic solutions to recurring problems. Part of this role will involve working with development teams to ensure best practices and overall policies are maintained when enhancements or new projects are being developed. This role will also require working with development teams to ensure that best practices are adhered to for on-going development cycles.
· DBA for production environment.
· Performance monitoring.
· Test and develop production jobs.
· Production Support.
· Working with development teams to ensure SQL best practices are maintained.
Experience with Database Administration for MSSQL Server.
Experience with Migration from SQL Server 2005 to SQL Server 2008 R2.
4-6 years' experience supportingaproduction environment.
Voice : 609-632-0276 | Fax :732-289-6076
Posted by Travel at 3:40 PM0comments
FIX protocol support/charlotte,NC/18 months
Position : FIX protocol support
I just need someone with FIX protocol support and fix protocol- building out the connections to the exchanges and ECN's with unix scripting (perl, shell, korn)
Posted by Travel at 3:09 PM 1 comments
IMMEDIATE START SAP test lead/Ft Lauderdale,FL/3 months w/ extensions
Position : SAP test lead
Location : Ft Lauderdale,FL
Duration :3months w/ extensions
Start: IMMEDIATELY! Can be as soon as Monday or2days from time of offer.
6+ years in the area of Testing
3+ years in the role of Test Lead
Prior experience leading system test efforts
Experience in SAP testing is highly preferred but not mandatory
Understanding of test process/methodology
Test tools (ex: HP Quality Center)
SharePoint configuration experience isaplus.
Accounting/financial experience preferred, but not required
Responsible for daily test leadership for all cycles of testing in implementation of SAP BPC. Coordination between project team and business customers in creation of test scripts according to standards, use of standard test tools, defect tracking and reporting.
Responsibilities include test planning, test execution, post implementation, leadership, and professional communication. The goal of the SAP Test Lead is to verify that the system under test meets project requirements by coordinating testing on the system after initial development has been completed (System Testing and User Acceptance Testing). The SAP Test Lead manages the test effort and is the overall owner of the test effort. Atahigh level the SAP Test Lead does the following on projects:
Works with the QA Manager to define project-specific test processes
Estimates and plans the system test effort
Ensures the creation of test documentation and assets
Manages/coordinates the execution of the test effort
Reports on test status and raises test-related risks
Posted by Travel at 1:26 PM0comments
Direct client, Interview Today NEED SAP PM CONSULTANT
Please let me know if you have any consultant for the following requirement.
Please forward the resume, anbu@simpbiz.com 248-823-8798 for more details.
Job Title: SAP PM (plant maintenance)
Anbumani | anbu@SimpBiz.com | IT recruiter/Sales Associate| SimpBiz Software Solutions Inc. | Office: | 248-823-8798 | http://www.SimpBiz.com |
Posted by Travel at 1:00 PM0comments
Immediate position Azure Specialist/Seattle,WA/long term contract
Position : Azure Specialist
2-3 years of Azure experience
The ability to write front end APIs
Previous experience designing indexes and building queries in Azure
Has built and shippedasolution in Azure
Has transformed data in the Cloud
Previous game or application experience
This enterprise level gaming organization is looking foraskilled Azure specialist eager to work with sports based applications. Strong candidates will possess an expert knowledge of Azure and must be willing to serve as the team's resident expert. Daily responsibilities include but are not limited to working with an internal catalog in the cloud, instructing other team members in Azure, and the general build of the team's data retrieval systems. This position demandsapassion for application development andadesire to progress professional growth.
Urgent Need for Sr Oracle Developer & Oracle Tech Lead , NYC ,6 Months , Need locals
This is satya, - Recruitment and Resources from SancroSoft USA Inc.
Please respond with resumes in MS-Word Format with the following details to satya@sancrosoftusa.com
YOU CAN CALL ME ON MY NUMBER:916-6715575
Position: Sr Oracle Developer & Oracle Tech Lead
Location: NYC ( Locals Only or anyone coming for F2F)
Open position: 14
Technology requirements with experience
Oracle PL/SQL (definitely required) 8 years +
SQL Tuning4years +
Oracle Deployment/Upgrade scripts4years +
Development in Unix, Linux Env4years +
Control-m2years +
Finance Background2years +
SVN Version control 1 years +
Business Objects or OBIEE 1 years +
- Ability to utilize programming methodologies and languages
- Efficient coding i.e. adhering to coding standards, procedures and techniques
- Effective analysis of new and existing applications and platforms
- Clear communication and documentation of technical specifications
Executive summary of the job's core purpose. Please describe the role in no more than5sentences.
-Demonstrate strengths in analysis, design and implementation of large projects at major financial corporation(s), particularly in areas of Oracle PL/SQL, Unix and control-m programming
- Provide technology solutions that address business needs by developing applications within technology environments
- Knowledge of design patterns and best practices for high performance, scalable, extensible applications
- Contribute to the technical code documentation
- Design, develop, and implement code
- Implement fixes and enhancements
- Create Test Plans, Test Cases and perform unit and integration testing
- Involved in full life cycle of project
- Good Technical Writing skills
Phone : 916-671-5575 , || Fax: 916-200-0305
E-Mail : satya@sancrosoftusa.com || www.sancrosoftusa.com
Posted by Travel at 12:13 PM0comments
Required: Java Developers at Walnut Creek, CA
To be considered for this position please send profiles to vick@blessosoftware.com
Position: Java Developers
- Should have been part of at least2SOA implementations.
- Should haveagood understanding of SOA maturity model & WS-* standards
- Ability to work in teams and has strong interpersonal skills.
- Ability to anticipate potential problems, determine and implement solutions.
- Strong JAVA, J2EE skills with Weblogic
- Hands-on experience in spring, Hibernate & SOA/ Web Services (JAX-RPC, JAX-WS, JAX-RS).
- Good understanding of Maven, Eclipse IDE and configuration (ChangemanDS / SVN) & Continuous Integration tools (Hudson/ Jenkins)
Blesso Software LLC
Posted by Travel at 11:55 AM0comments